Taliyihii Guutada 13aad oo lagu dilay dagaal ka dhacay Cadakibir | Dhacdo
Home Wararka Maanta Taliyihii Guutada 13aad oo lagu dilay dagaal ka dhacay Cadakibir
Taliyihii Guutada 13aad oo lagu dilay dagaal ka dhacay Cadakibir
Taliyihii Guutada 13aad ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, G/dhexe Cali Maxamed Axmed (Soocadde) ayaa ku dhintay dagaal culus oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka Cadakibir ee Gobolka Galgaduud.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa weeraray deegaankan oo hoos-tagga Degmada Cadaado, xilli ay la wareegeen Shabaabka, khudbadna ay dadka deegaanka ugu jeedinayeen.
Dagaalka oo ahaa mid hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa soo gaaray 7-dii fiidnimo, iyadoona ay ciidanku dib ugu laabteen deegaanka Baxdo, oo markii horeba ay ka dhaqaaqeen.
Waxa weerarka ciidanka fashiliyay ayaa lagu sheegay, iyagoo deegaankaasi ugu tegay maleeshiyaad fara-badan oo kuwa Shabaabka ah.
Sarkaal ka tirsan Taliska Qaybta 21aad ayaa inoo sheegay “Dagaalka 5-tii galabnimo ee maanta ayuu bilowday, waxaana uu soo gaaray 7-dii fiidnimo ee caawa. Ciidanka Xoogga Dalka ayaa dagaalka qaaday oo ka ruqaansaday deegaanka Baxdo.”
Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa intaasi ku daray “Ciidanka dib bay ugu soo laabteen Baxdo, koley hadda waxaa socdo abaabul ciidan oo aan dib ugu wajahayno Cadakibir. Anaga saddex askari ayaa naga shahiiday oo uu ku jiro Taliyihii Guutada 13aad, Gaashaanle Dhexe Cali Maxamed Axmed (Soocadde), lix askarina waa naga dhaawacantay.”
Alle ha u naxariistee Taliye Soocadde ayaa dhawaan xilka kala wareegay Taliyihii hore ee Guutada 13aad, Gaashaanle Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud (Timo-dheere).
Previous articleDagaal dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay Guriceel
Next articleRW Rooble oo la kulmay Shariif Sheekh Axmed & Xasan Cali Khayre